Ny Huawei Mate 20 Lite dia havoaka any Espana amin'ny 10 septambra | Androidsis
Ny Huawei Mate 20 Lite dia ho tonga any Espana amin'ny herinandro ho avy
Ny Huawei Mate 20 Lite dia iray amin'ireo tsy nampoizina tamin'ity IFA 2018 ity, izay nanolorana azy tamin'ny fomba ofisialy. Ilay maodely vaovaon'ny mpanamboatra sinoa, izay zahana ho topy maso ny elanelan'ny Mate 20 izay ho tonga amin'ny Oktobra. Ity telefaona ity dia efa natolotra teo aloha ary hamely ny tsena tsy ho ela koa. Satria ny daty hahatongavan'ity modely ity any Espana, ankoatry ny vidiny amidy, dia efa nambara.
Ary tsy mila miandry ela loatra isika vao hividy an'ity Huawei Mate 20 Lite any Espana ity. Ny famoahana ny telefaona dia kasaina hatao amin'ny herinandro ho avy.
Ny daty nofidian'ny orinasa Mandrosoa ity Huawei Mate 20 Lite any Espana ity dia amin'ny 10 septambra. Noho izany, amin'ny alatsinainy ho avy izao ity modely ity dia azo vidiana amin'ny fomba ofisialy manerana ny firenena. Tsy nisy antsipiriany manokana nomena, saingy antenaina fa ho tonga amin'ny mpivarotra mahazatra rehetra izy ireo.
Noho izany, kely sisa ny fotoana hividianana ity modely vaovao ity amin'ny mpanamboatra sinoa. Ankoatr'izay dia naseho koa ny vidiny hoentiny amin'ny fandefasana azy eto amintsika. Ny vidiny farany amin'ity Huawei Mate 20 Lite ity dia 399 euro any Espana. Vidiny izay toa marina raha jerena ny fizarana azony.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy loko roa nohamarinin'ny marika. Hivoaka amin'ny lalana miloko manga sy mainty izy io. Tsy misy vaovao momba ny fampifangaroana loko maro kokoa, noho izany dia heverinay fa farafaharatsiny mba tsy hisy ny kinova hafa amin'ny telefaona vaovao avy amin'ny marika sinoa.
Tsy maintsy jerentsika ny fomba fandraisan'ny mpanjifa any Espana finday vaovao ity. Ny Huawei Mate 20 Lite no jery todika voalohany amin'ny fianakavian'ireo mpanamboatra finday vaovao. Ireo modely avo lenta roa dia havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana oktobra. Ahoana ny hevitrao momba ity maodely ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei Mate 20 Lite dia ho tonga any Espana amin'ny herinandro ho avy
Ny finday Samsung azo ahodina hivoaka amin'ny volana Novambra